Belarus: Russian masenaries anovhiringidza zano `` kutya ''! - Tamban RELAY
Belarus: Kuongorora kweRussia masenari e "kutya" kuronga!
Belarus inovhura kuongorora kwematsotsi mu "zviitiko zvehugandanga" zvakarongwa nemaRussia masenaries akasungwa pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika.
Belarus yakavhura kuongorora kwemhosva mu "zviitiko zvehugandanga" zvakarongwa na Russian anomenaries akasungwa pasarudzo dzemutungamiri wenyika, achiwedzera kuti aive achitevera mamwe akawanda.
Masangano ekudzivirirwa kwenyika neChitatu akasunga boka revarwi makumi maviri nevaviri veRussia uye mumwe murume kune imwe nzvimbo.
Mukuru wevashandi vekuchengetedzeka kweBelarusian, Andrei Ravkov, akataura neChina kuti kuongororwa kwematsotsi kwatanga uye kuti varume vacho vakapomerwa mhosva yekugadzirira "zviitiko zvehugandanga".
“Makumi matatu nevatatu vakasungwa; pane anosvika mazana maviri kana kupfuura panharaunda (yeBelarus), ”akadaro Ravkov.
Akataura kuti "kutsvaga kwaitika" kutsvaga vamwe vacho, vachinyunyuta kuti "zvainge zvakafanana nekutsvaga tsono mune hari".
Vanochengetedza KGB muBelarus vakati varume vakasungwa vaive nhengo dzeWagner Group, kambani yemauto yakazvimirira inofungidzirwa kuti yaidzorwa nemubatanidzwa weMutungamiri weRussia Vladimir Putin uye inorwira zvido zveMoscow muUkraine, Syria uye muLibya.
Kusungwa uku kwakaitika pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika, Nyamavhuvhu, umo mune murume akasimba Alexander Lukashenko.
Lukashenko akasunga vanopikisa uye nevatsigiri vavo.
Kudzivirirwa kwakaitika mudunhu rose revanhu, mamirioni mazana mapfumbamwe nemashanu, nevane makore makumi mana nematatu Svetlana Tikhanovskaya akakurumidza kuve mutsi mukuru waLukashenko.
Lukashenko akapomera vamwe vevakamutsoropodza kuti anodzorwa ne "vana vekupaza" muMoscow.
Ravkov akataura mushure mekusangana nevari kupokana naLukashenko, kusanganisira Tikhanovskaya, uye akavayambira kuti nzira dzekuchengetedza dzikwidziridzwa kumisangano.
Gare gare, yeBelta News Agency yehurumende yakataura kuti zviremera zveBelarusian zvinotenda kuti murume waTikhanouskaya anogona kuve nehukama kuboka reRussia uye akamhan'arira mhosva yekufungidzira kumutsa bongozozo.
Belta akambotaura kuti zviremera zvakawana ruzivo nezvekuuya kwavarwi mazana maviri muBelarus "kugadzirisa mamiriro panguva yesarudzo".
Mumusangano wechimbichimbi wekanzuru yake yezvekudzivirirwa neChitatu, Lukashenko akatsvaga tsananguro kubva kuMoscow.
"Kana vaine mhosva, zvakafanira kuti ubude mumamiriro ezvinhu akadai," Lukashenko akadaro achifonera.
Mumiriri weRussia kuBelarus Dmitry Mezentsev nemusi weChina vakadanwa kuBelarusian Kunze kwenyika mangwanani iwayo kuzotaura nezvenyaya iyi, masangano enhau eRussia akataura.
Mutauriri weKremlin, Dmitry Peskov, akati Moscow inoda tsananguro izere kubva kuBelarus pamusoro pevaRussia vakasungwa uye vanovimba kuti kodzero yavo icharemekedzwa zvizere.
"Hatina ruzivo nezve zvisiri pamutemo zvinoitwa navo," Peskov akadaro muMoscow. “Tinotarisira kugashira ruzivo ruchatigonesa kugadzirisa dambudziko iri. "
Peskov akati kwaive nevarume vazhinji veBelarusian vane rondedzero yakafanana muRussia, asi VaMoscow havana kufunga kuti vaiita chero zvisiri pamutemo.
Zvakare neChina, Belarus neUkraine dzakabvumirana kuomesa miganhu uye kuwedzera kushandira pamwe kwemashure zvichitevera kusungwa, Belarusian yekune dzimwe nyika yakati.
Iyi danho rakanangana nekudzivirira chero kuyedza kugadzirisa nyika mbiri, Ministry yeBelarusian ichitaura, zvichitevera musangano ne Mezentsev uye Mumiriri weUkraine Ambiriri kuBelarus.
kunobva: https: //www.aljazeera.com/news/2020/07/belarus-probes-russian-mercenaries-terror-plot-200730092717064.html
Switzerland: Mhosva dzekupara mhosva dzakavhurwa pamusoro peFIFA sahwira Infantino
KLM inozivisa 1500 itsva layoffs yekuunza mabasa kudzikiswa makumi maviri